ढोका बन्द गर्न प्रयोग गर्थे १० किलोको ढुंगा, जसको मूल्य करोडभन्दा धेरै परेपछि… | Rajmarga
ढोका बन्द गर्न प्रयोग गर्थे १० किलोको ढुंगा, जसको मूल्य करोडभन्दा धेरै परेपछि…
अमेरिकाको मिशिगनमा बस्ने एक व्यक्तिले एउटा १० किलोको ढुंगालाई ढोका बन्द गर्न प्रयोग गर्थे । उनले विगत ३० वर्षदेखि त्यो ढुंगाले भित्रपट्टिबाट अड्काएर ढोका बन्द गरिरहेका थिए । अहिले त्यो ढुंगाको वास्तविकता खुलेको छ । त्यो साधारण ढुंगा नभइ एउटा उल्कापिण्ड भएको खुलेपछि अहिले त्यसको मूल्य १ लाख डलर (झण्डै १ करोड १८ लाख नेपाली रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ ।
ती व्यक्तिले यो ढुंगा उपहारको रुपमा पाएका थिए । उनले १९८८ मा आफ्नो सम्पत्ति बेचेपछि यो ढुंगा उपहार पाएका थिए । ती व्यक्तिलाई यो ढुंगा उपहार दिने व्यक्तिका अनुसार यो ढुंगा उनले सन् १९३० मा खेतमा भेटेका थिए । त्यतिबेला यो ढुंगा तातो थियो । अहिले यो ढुंगा राखिरहेका व्यक्तिका अनुसार यसको आकार ठिकठाक लागेपछि उनले यसलाई ढोका अड्याउन प्रयोग गरिरहेका थिए । हालै उनको दिमागमा विचार आएको थियो कि यसको मूल्य कति पर्ने रहेछ भनेर पत्ता लगाउने ।
ढुंगाको वास्तविकताबाट अन्जान व्यक्तिले त्यसलाई मिशिगत युनिभर्सिटी लिएर गए । त्यहाँ जियोलोजीकी पेफेसर मोनालिसा सर्वेस्कु यसको आकार देखेर छक्क परिन् । उनले यो ढुंगाको एक्सरे र फ्लोरोसेन्स परीक्षण गराइन् । जाँचमा पत्ता लाग्यो कि यो ढुंगामा ८८ प्रतिशत फला १२ प्रतिशत निकेल र केही मात्रामा इरिडियम, ग्यालियम र सुन पनि थियो । यसलाई वाशिङटनको स्मिथसोनियन युनिभर्सिटी पठाइयो जहाँ यो उल्कापिंड भएको पुष्टि भयो । एजेन्सी
Previous post: ‘बा-आमा घर’को निर्माणको लागि सहयोगार्थ साँस्कृतिक कार्यक्रम
Next post: कसरी दम्पतीले २० महिलाको हत्या गरे?
एउटा पर्सको मूल्य कति पर्ला ? चार करोडको पर्स देख्नु भएको छ ?
सुन्दै अचम्म १४० फिट अग्लो मन्दिरको छानोमा सय वर्ष पूरानो रुख (भिडियोसहित)
अनौठो शोधः संसारका सबै मानिस रोए पनि आँसुले सानो नदी पनि बन्दैन
केही दिनघि नै मरेका व्यक्ति उठेर–‘गल्तीले यमराजले लगेका रहेछन्’ भनेपछि मच्चियो बबाल
युरोपमा निर्वस्त्र भएर घरको सफाइ गर्ने कर्मचारीहरूको माग बढ्दो
सरकारले मलको आपूर्ति तथ्य र आवश्यकताका आधारमा गर्ने कृषिमन्त्री
महोत्तरीको जङ्गलमा पाँच दर्जन नीलगाई देखियो
पश्चिमी वायुको प्रभावले हल्का वर्षा हुने सम्भावना
कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा मात्रै सरकारमा जान्छः डा. प्रकाशशरण महत